पोखरामा सेतोपुतलीको संक्रमण शुरु, उपचारमा ढिलाई भए आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने - HealthyKhabar
पोखरा १८, भदौ ।के तपाँईको घरमा सेतो बत्ती बाल्ने गर्नु भएको छ यदि यस्तो बत्ती बाल्ने गर्नु भएको छ भने ख्याल गर्नुहोला । सेतो बत्ती वरिपरि सिजनमा देखा पर्ने सेतो पुत्तली देखा पर्न थालेको छ की त्यसमा ख्याल गर्नुहोस् । यदि सेतो बत्तीमा सेतो पुतली आउन थालेको छ भने तपाँईहरुलाई केही जोखिम निम्तिदैछ भन्ने बारेमा सजग हुनुहोस ।
यदि सेतो पुतली तपाँइको घरमा आएको छ भने त्यसलाई नचलाउनु होला, त्यसबाट बच्न सक भर सेतो बत्ती नबाल्नु राम्रो, बिषेश गरी वालबालिकामा यसको संक्रमण छिटो हुने हुँदा उनीहरुलाई सेतो पुतलीबाट टाडा राख्नु होला । प्रायः गरी भदौं र असोज महिनामा देखापर्ने सेतो पुतलीको झुस कर्णहरु आँखामा पर्न गएमा समयमै उपचार हुन नसके आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने चिकित्सकहरुले बताउदै आएका छन् । पोखरा क्षेत्रमा यता कता सेतो पुतली देखा परेसंगै मानिसहरुलाई यसले दुःख दिन थालेको छ । यदि तपाँइ र तपाईका कुनै व्यक्तिमा सेतो पुतली संत्रमण भएमा तपाईहरुको आँखा रातो हुने, दुःख्ने र आँखा बन्दको बन्दै हुने समस्या भएमा तत्काल जति सक्दो छिटो नजिकको आँखा अस्पतालमा पुर्याउनु होला उपचार सम्भव छ । सेतो पुतली संक्रमित भएका बिरामीलाई समयमै वा एक दिन (२४ घण्टा ) भित्र उपचार गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा पुर्याउन सकेको खण्डमा सुइ, अप्रेशन, औषधि कुनै विधिबाट तपाँईहरुको उपचार सम्भव हुन्छ । दुई बर्ष अघि पोखरामा सेतो पुतली आतंक जस्तै भएको थियो भने सेतो पुतलीको संकमण पोखरामा यस सिजनमा शुरु भएको हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका प्रमुख डा. इन्द्र महर्जनले बताए । उनका अनुसार दुई बर्ष अघि पोखरामा सेतो पुतलीका कारण २६ जना बिरामीहरु अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका थिए ।
पोखराको न्यूरोडमा रहेको माछापुच्छ्रे बैंंकको एटिएम मेसिनको रहेको कोठामा समेत ७/८ वटा सेतो पुतली रहेको छ । यस्ता धेरै ठाँउमा सेतो पुतली आउन थालेको हो । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सेतोपुतलीबाट बच्न र बचाउनको लागि आफुहरुले विभिन्न निकायमा समेत जानकारी गराएको डा. महर्जनले जनाए । यो समाचार पोखरा न्यूजमा दीननाथ बरालले लेख्नुभएको हो।